Nhau - Ndeipi iyo photovoltaic yakagadzirirwa kabhini, mabhenefiti uye hunhu?
Runhare: +86 18257770162
Yakakwira Voltage switchgears
Yakadzika magetsi switchgears
Chamber type chinzvimbo
Yakakwira voltage tambo yekuparadzira bhokisi
Yakakwira voltage wedunhu mudariki switch
Photovoltaic mubatanidzwa bhokisi
Ndeipi iyo photovoltaic yakagadzirirwa kabhini, mabhenefiti uye hunhu?
Nekufarirwa kwenzvimbo dzemagetsi dzefotovoltaic, pane mibvunzo yakati wandei yakakosha pamusoro pema photovoltaic akafanirwa mamodule ezvinzvimbo zvemagetsi zve photovoltaic. Chii chinonzi photovoltaic yakagadzirirwa module? Ndezvipi zvakanakira iyo?
Chii chinonzi photovoltaic yakagadzirirwa module?
Pahwaro hwepfungwa yepakati ye "mugove wakatarwa", iyo State Grid yakatanga iyo yekunze smart smart chinzvimbo. Kubvumidzwa kweyakavakirwa kabhini kwayakave chiyero chakakosha pakuvaka kwechipiri michina inotakura yeiyo smart substation.
Nekumhanyisa yekumhanyisa yekuchenjera gridhi yekuvaka, kumhanya kwekumisikidza kuvaka kuri kusaririra kumashure. Kuti ikurumidze kutenderera kweiyo smart substation, iyo State Grid Corporation yeChina inoisa pamberi mureza wekugovera chishandiso chekuvaka modhi.
Kubudikidza nechirongwa che "dhizaini dhizaini, kugadzira fekitori uye kuvaka gungano", iyo smart substation (photovoltaic yakagadzirirwa kabhini) inogona kukurumidza kusimudzirwa uye kuiswa.
Icho chakakosha chimiro cheiyo nyowani tekinoroji, zvinhu zvitsva uye zvishandiso nyowani zve smart smart chishandiso application. Nekuda kweiyo dhigirii yepamusoro yekubatanidzwa, dhizaini yendege ndege yebhokisi inoshandura yakagadziridzwa zvakanyanya.
Iyo inoumbwa ne photovoltaic yakagadziriswa kabhini, yechipiri midziyo pabhodhi kabhineti (kana rack), kabhini yekubatsira zvivakwa uye zvichingodaro. Iyo inopedzisa kugadzirwa, kuungana, wiring, kugadzirisa dambudziko uye rimwe basa mufekitori, uye inoendeswa kunzvimbo yeprojekiti izere, iri pahwaro hwekuisirwa.
Iyo photovoltaic yakagadzirirwa kabhini uye yechipiri michina mukati munoziva iyo yakazara seti yechipiri michina inosanganiswa nemugadziri kuti aone kugadzirwa kwefekitori, kudzora wechipiri wiring pane saiti, kudzora dhizaini, kuvaka, kutumira, kuwanda kwebasa, kurerutsa basa rekuchengetedza, kupfupisa iyo kutenderera kutenderera, uye nekunyatso tsigira iko kukurumidza kuvakwa kwesimba gridhi.
Zvakanakira PV Yakagadzirirwa kabhini?
Inofananidzwa neyechinyakare chinomiririra, iyo yakagadzika kabhini yakasanganiswa yechipiri michina inogona kunyatso kuderedza nzvimbo yekuvaka. Iyo yakagadzirirwa kabhini yakasanganiswa yechipiri michina inoshandisa nzira yekugadzirisa fekitori uye pane-saiti kusimudza.
Bvisa chimiro, masonry, kushongedza, kuiswa kwemagetsi uye zvimwe zvinongedzo mune yekuvaka maitiro, zvinobudirira kudzora kusvibiswa kwezvakatipoteredza, kunyatso chengetedza kuchengetedzeka uye kuvimbika kwemidziyo.
Panguva imwecheteyo, iyo yekudzora maitiro inovandudzwa, uye yechinyakare serial yekuvaka modhi inoshandurwa kuita yakafanana kuvaka nzira, iyo inogona kunyatso kuvandudza kugona kwekugadzira uye kuvaka, kunyatso kupfupisa iyo nguva yekuvaka, uye zvakare kudzikisa zvakanyanya iyo pa-saiti pakutuma zvirongwa zvechipiri michina.
Nekuti iyo yakagadzikwa kabhini yakaunganidzwa pamwe nharaunda ine hushamwari yakasanganiswa zvinhu uye yakaiswa munzvimbo yekuparadzanisa, iyo kureba kwechipiri mwenje / tambo inogona kudzikiswa zvinobudirira, nokudaro ichideredza mutengo weprojekiti.
Ndeapi maitiro eiyo photovoltaic yakagadzirirwa kabhini?
Nehunyanzvi hwehunyanzvi hwekumisikidza, modularization uye preabrication, iyo inogadzira inogona kugadzirisa saizi chaiyo zvichienderana nezvinodiwa chaizvo zvemidziyo kabhineti, kuti ienderane neyakajairika mashandiro emidziyo.
Kumisikidza: kukura kweyakagadzika kabhini kunoreva saizi yemudziyo wakajairika uye kunatsiridzwa nemazvo kuzadzisa zvinodiwa nemidziyo. Kuitira kuti zviite zvakajairika mashandiro emidziyo zvakanyanya, ichazadzisa inoenderana mamiriro.
Modularization: zvinoenderana neakasiyana mashandiro emidziyo yemukati, iyo yakagadzirirwa kabhini inogona kuganhurwa mumamojuru senge yeruzhinji michina kabhini, spacer michina kabhini, AC / DC magetsi emagetsi kabhini nebhatiri kabhini, nezvimwe. Mune akasiyana ma module, inogona kukamurwa kuita akati wandei ma-module zvinoenderana akasiyana emagetsi mazinga.
Prefabrication: chimiro cheakagadzika kabhini, kuiswa kwemidziyo yemukati, kubatana pakati pemidziyo yemukati, tambo netambo dzemaziso pakati pezvigadzirwa zvemukati zvinogadziriswa nekugadzwa kwefekitori, uye kumisikidzwa, wiring uye kutumwa kwemidziyo yese yakapera mufekitori.
Iyo yakagadzirirwa kabhini nemidziyo yayo yemukati inoendeswa kunzvimbo yekuchinjisa seyakazara, uye iko kwekuvaka saiti kugona kunovandudzwa kuzadzisa chinangwa chekudzora kutenderera kwekuvaka kweiyo smart substation!
Post nguva: Kubvumbi-19-2021
Chii chinonzi mhepo uye kumanikidza kuramba ...
Chii chinonzi photovoltaic yakagadzirirwa ca ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pehurumende subs ...
Adress: NO.3, Siqian Road, XinGuang Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing, Wenzhou Guta, Zhejiang, China
Tidaidze Iye Zvino: +86 18257770162
© Copyright - 2010-2021: Suntree. Technical rutsigiro: